ယရေှုခရဈအသခေံတော်မူသောနေ့ရကျ | The Day Jesus Died| Real Conversion
၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဧပြီလ( ၁၃ )ရက်ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့ညနေပိုင်းအစီအစဉ်၌ လော့ဒ်အိန်ဂျဲလ်ရှိ အသင်းတော်တွင် ဟောကြားသောတရားဒေသနာဖြစ်ပါသည်။
”ထိုအခါပိလတ်မင်းသည်ယေရှုကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားစေခြင်းငှါထိုသူတို့ လက်သို့အပ်သဖြင့်၊ သူတို့သည် ကိုယ်တော်ကိုယူ၍ ထုတ်သွားကြ၏။ ကိုယ်တော်သည် မိမိလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုထမ်းလျက် ဦးခေါင်းခွံအရပ် ဟူ၍တွင် သောအရပ်သို့ ထွက်တော်မူ၏။ ထိုအရပ်ကား၊ ဟေဗြဲစကားအားဖြင့် ဂေါလ ဂေါသအမည်ရှိ၏။ ထိုအရပ်၌ ကိုယ်တော်ကို အခြားသောသူ နှစ်ယောက် နှင့်တကွ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားကြ၏။ထိုသူနှစ်ယောက် အလယ်မှာ ယေရှုနေရာ ကျသတည်း။” ( ယောဟန် ၁၉း ၁၆-၁၈ )
ယေရှုလက်ဝါးကပ်တိုင်၌ အသေခံတော်မူသောနေ့ရက်သည်လူ့သမိုင်းတွင် စတုတ္ထ မြောက်သော အရေးကြီးသည့်နေ့ရက်ဖြစ်ပေသည်။ ပထမနေ့ရက်မှာ ပထမဆုံးလူသားကို ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းသော နေ့ဖြစ်သည်။ ဒုတိယနေ့ရက်မှာ လူသားများပြစ်မှား၍ အပြစ်ထဲလဲကျပြီး သေခြင်းကိုဆောင်ယူလာကာ လောကထဲဝင်လာခဲ့သည့်နေ့ဖြစ်သည်။ တတိယမြောက်နေ့ရက်မှာ နောဧလက်ထက်ရေလွှမ်းမိုးခြင်း စတင်သည့်နေ့ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် စတုတ္ထမြောက် အရေးကြီးသည့် နေ့ရက်မှာ ယေရုရှလင်မြိုရိုး အပြင်ဘက်တောင်ကုန်းပေါ်ရှိလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်၌ယေရှုအသေခံခဲ့သော နေ့ပင်ဖြစ်သည်။
ခရစ်တော်လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ အသေခံသောနေ့တွင် လူ့သမိုင်းတစ်ခုလုံးသည် လုံး၀ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ လူ့ဘ၀သက်တာ များစွာသည်လည်း ထောင်ပေါင်း များစွာအားဖြင့် ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ အသက်ဝိညာဉ်များ ပြောင်းလဲလာကြသည်ဖြစ်၍ ကမ္ဘာကြီးသည်ပင် ထူးခြားပြောင်းလဲလာသည်။ ယနေ့ညတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်အသေခံသော နေ့ရက်ကို သမင်လည်ပြန်ကြည့်၍ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အဖြစ်အပျကဲ်ကြီး လေးချက်ကိုလေ့လာမှတ်သားကြပါစို့။ ၁။	ပထမဆုံးအချက်-ထိုနေ့၌မှောင်မိုက်အတိကျရောက်ခဲ့သည်။
“ယခုခြောက်ချက်တီး အချိန်(မွန်းတည့်)မှစ၍ ကိုးချက်တီး အချိန် (ညနေ ၃ နာရီ ) တိုင်အောင် မြေတပြင်လုံး၌ မှောင်မိုက်အတိ ဖြစ်လေ၏။}} (မဿဲ ၂၇း ၄၅ )”
Dr. J. Vernon McGee က ဤသို့ပြောဆိုထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ယေရှုသည် မနက် ၉ နာရီအချိန်ဖြစ်မည့် သုံးချက်တီးအချိန်တွင် လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ ဆွဲထားခြင်းကိုခံခဲ့ ရသည်။ မွန်းတဲ့ ၁၂ နာရီအချိန်လောက်တွင် လူသားများသည် ဘုရားခင်၏ သားတော်အပေါ်ပြုနိုင်သမျှ အမှုအားလုံးကို ပြီးစီးခဲ့ကြသည်။ မွန်းတည့်အချိန်တွင် မှောင်မိုက်အတိကျ ရောက်ပြီး လက်ဝါးကပ်တိုင်သည်လည်း ဤလောက၏ အပြစ်ကို ဆောင်သွားသောသိုးသူငယ်ကိုပူ ဇော်ရာယဇ်ပလ္လင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ (Thru the Bible, Thomas Nelson, 1983, volume IV, p. 148 ).
မဿဲ၊ မာကု၊ လုကာတို့က ယေရှုအသေခံသည့်အချိန်တွင် မွန်းတည့်အချိန် မှစ၍ သုံးချက်တီးအချိန်ထိ မြေတပြင်လုံး၌မှောင်မိုက် အတိဖုံးလွှမ်း ထားကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား မိန့်တော်မူကြသည်။ ဒေါက်တာ John Mac Arthur က အသွေးတော်အကြောင်း ပြောဆိုသည်တွင် မှားယွင်းသော်လည်း ဤမှောင်မိုက် အကြောင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ ပြောဆိုမှုတွင်မှန်ကန်ပေသည်။
ဤမှောင်မိုက်သည် နေ၊ လကြတ်ခြင်းမဟုတ်ပေ။ အကြောင်းမှာ ဂျူးလူမျိုးများသည် လနှင့်ဆိုင်သော ပြက္ခဒိန်ကို အသုံးပြုကြ သည်ဖြစ်၍ ပသခါပွဲတော်သည်လပြည့်နေ့တွင်အမြဲကျ လေ့ရှိသဖြင့် နေ၊ လကြတ်ခြင်းသည် မေးခွန်းထဲထည့်သွင်း၍မရပေ။ ဤသည်မှာ သဘာ၀လွန်မှောင်မိုက်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ John MacArthur Study Bible, ) ဖော်ပြချက
ဘုရားသခင်သည်မောရှေလက်ထက်တွင် ထိုသို့သောမှောင်မိုက်ကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ ထို့နည်းတူ ခရစ်တော်လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ အသေခံတော်မူသည့် အချိန်တွင်လည်း ထိုသို့မှောင်မိုက်ကို စေလွှတ်တော်မူခဲ့သည်။ Dမ. Wအေအျ က ဤသို့ဆိုထားသည်။
]”တဖန်ထာ၀ရဘုရားက၊ အဲဂုတ္တုပြည်တရှောက်လုံး၌ မှောင်မိုက် သာမညမဟုတ်၊ စမ်းသပ်၍တွေ့ရသောမှောင်မိုက်ဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ သင်၏လက်ကိုမိုဃ်းကောင်းကင်သို့ ဆန့်လော့ဟု မောရှေအား မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ မောရှေသည် မိမိလက်ကို မိုဃ်းကောင်း ကင်သို့ဆန့်၍၊အဲဂုတ္တုပြည်တရှောက်လုံး၌ထူထပ်သောမှောင်မိုက်သည် သုံးရက် ပတ်လုံးဖြစ်လေ၏။” (ထွက် ၁ဝး၂၁-၂၂ )
တန်ခိုးကြီးသော ဖန်ဆင်းရှင်ခရစ်တော်သည် ဖန်ဆင်းခံ လူသားများ၏အပြစ်အတွက် အသေခံသည့်အချိန်တွင် ရေတွင်းသည် နေမင်းကို မှောင်မိုက်ထဲ၌ကွယ်ဝှက်ထားပြီး သူ၏ဘုန်းရောင်ခြည်ကို လှောင်ပိတ်ထားသည်။ a
(Isaac Watts, D.D., 1674-1748 ရးသား ထားသည့် “Alas! And Did My Saviour Bleed?” ကောက်နူတ်ချက် ဖြစ်သည်။)
၂။ ဒုတိယအချက်- ထိုနေ့၌ဗိမာန်တော်အတွင်းရှိ ကုလားကာကွဲသွားခဲ့သည်။
“ထိုအခါ ဗိမာန်တော်ရှိကုလားကာသည် အထက်စွန်းမှအောက်စွန်း တိုင်အောင်စုတ်ကွဲလေ၏။” ( မဿဲ ၂၇း ၅၁ )
ဗိမာန်တော်၏အတွင်းပိုင်းတွင် ကြီးမားပြီးပါးလွှာသည့် ကုလားကာတစ်ခုရှိသည်။ Dr. John R. Rice က တဲတော်အကြောင်းကို ဤသို့ပြောဆိုထားသည်။
သန့်ရှင်းရာဌါန သို့မဟုတ် တဲတော်သည် အလျား ပေ ၉၀၊ အကျယ် ပေ ၃၀၊ နှင့်အမြင့် ပေ ၉၀ ခန့်ရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အားသွန်သင်သည်။ သန့်ရှင်းရာဌါနတော်ကို အပိုင်း နှစ်ပိုင်း ခွဲခြားထားသည်။ ပထမဆုံးပေ ၆၀ သည် သန့်ရှင်းရာဌါနဖြစ်သည်။ သန်းရှင်းရာဌါနကို အဆောက်အဦး၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန့်ရှိသည့် အသန့်ရှင်းဆုံးဌါနနှင့် ကြီးမားသည့် ကုလားကာဖြင့် ပိုင်းခြား ထားသည်။ ( Dမ. Jသ့ည R. Rငခန ရေးသားသည့် ၁၉၅၅ခုနှစ်ထုတ် သခင်ဘုရား၏ဓါးစာစောင်ရှိ The King of the Jews: A Commentary on Matthew, ယ စာမျက်နှာ ၄၇၉ မှ ကောက်နှုတ်ချက်ဖြစ်သည်။)
Dr. Rice သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းမှတပါး အဘယ်သူမျှဝင်၍မရနိူင်သော အသန့်ရှင်းဆုံးဌါနအကြောင်းကို ဆက်လက်ညွှန်ပြခဲ့သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည်လည်း တစ်နှစ်လျှင်တစ်ခါ အပြစ်ဖြေရာနေ့တွင်သာ ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် Dr. Rice ပြောဆိုသည်မှာဤသို့ဖြစ်သည်။
လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်၌ ခရစ်တော်အသေခံတော်မူသော အချိန်တွင် ]]ဗိမာန်တော်ရှိ ကုလားကာသည် အထက်စွန်းမှအောက်စွန်း တိုင်အောင်}} နှစ်ခြမ်းကွဲစုတ် လေသည်။ (မဿဲ ၂၇း၅၁) အထက်စွန်းမှစတင်၍ ကွဲစုတ်သွားခြင်းသည် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင်ဆုတ်ဖြဲသည်ကို ဖော်ပြထားသည်။ကုလားကာသည် အောက်ဘက်သို့ စုတ်ပြဲသောအခါခရစ်တော်၏ မျက်မှောက် တော်သို့တိုးဝင်ချဉ်းကပ်လိုသူတိုင်းအတွက် ဘုရားသခင်နှင့် လူကြားရှိ အတားအဆီးတိုင်းကိုဖယ် ရှားပေးသည်။ (စာမျက်နှာ ၄၈၀ )
၃။ တတိယအချက်-ထိုနေ့၌ မြေကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့သည်။
”မြေကြီးလှုပ်လေ၏။ ကျောက်များတို့သည် ကွဲပြားကြ၏။ “(စာမျက်နှာ ၄၈၀)
ဤမြေကြီးလှုပ်ခတ်ခြင်းသည် ကုလားကာစုတ်ကွဲခြင်းတွင် ပါဝင်ချင်ပါဝင်နိူင် ပေသည်။ ထိုသို့ဖြစ်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တွေးထင်မိသည်။ သို့သော် နိနမျ့နငာ မိန့်ဆိုသည့်အတိုင်းလည်း ဖြစ်နိူင်ပေသည်။ "မြေကြီးလှုပ်ခတ်ခြင်းသည် အပြင်ပိုင်း၏ အခြေခံသဘောတရားကို ထောက်ပံ့ပေးသော်လည်း ဗိမာန်တော်ကုလားကာ စုတ်ကွဲ သွားခဲ့ခြင်းမှာ ဘုရားသခင်၏လက်တော်အမှန်ပင်ဖြစ်ပေသည်။" (Alfred Edersheim ရေးသားသော ၁၉၄၅ခုနှစ်ထုတ် The Life and Times of Jesus the Messiah စာအုပ် အတွဲ ၂၊ စာမျက်နှာ ၆၁၁ မှ ကောက်နှုတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။) Edersheim က ကုလားကာအထူမှာ လူတစ်ယေါက်၏လက်တစ်ဖဝါးစာ( ၂လက်မခွဲ)ခန့် ရှိသည်ဟုလည်းဆိုသည်။ "ကုလားကာသည် ပညတ္တိကျမ်း၌ ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ ဖြစ်မည်ဆိုလျှင် သာမန်မြေကြီးလှုပ်ခတ်ရုံ သက်သက်ဖြင့် နှစ်ခြမ်းကွဲနိူင်စရာ အကြောင်းမရှိပေ။" (ထပ်၍)
"ကုလားကာစုတ်ကွဲခြင်းသည် ]]ယဇ်ပုရောဟိတ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက် နံ့သာမွှေးမီးရှို့ရန် သို့မဟုတ် အခြားဆောင်ရွက်စရာများ ဆောင်ရွက်ရန် သန့်ရှင်းရာဌါနတော် သို့ဝင်ရောက်သည့် ညနေခင်းယဇ်ပူဇော်သည့် အချိန်တွင်ဖြစ်ပျက်သည်။" (ထပ်၍) ကုလားကာ စုတ်ကွဲခြင်းသည် ဤဂျူး ယဇ်ပုရောဟိတ်များအပေါ်ကြီးမားသည့်ဖိအားဖြစ်စေခဲ့သည်။ဒေါက်တာ Charles C. Ryrie က ဤသဘာ၀လွန် ကုလားကာစုတ်ကွဲခြင်း၏ အကျိုးရလဒ်တစ်ခုကို ]]ယဇ်ပုရောဟိတ် အပေါင်းတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းတရားကို နားထောင်ကြ၏}} ဟု ကျွန်ုပ်တို့အား မိန့်ဆိုသောနေရာ တမန်တော် ၆း၇ တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။( မဿဲ ၂၇း၅၁ နှင့်ပါတ်သက် Ryrie Study Bible မှ ကောက်နှုတ်ထားသည်။)
ခရစ်တော်အသေခံတော်မူသောအချိန်တွင် ကုလားကာ နှစ်ခြမ်းကွဲသွားခဲ့သည်။ ယခုတွင် ခရစ်တော်သည် အာမခံဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်နိူင်ပေသည်။ဘုရာသခင်နှင့်သင့်၏ကြားတွင် မည်သည့် ကုလားကာမျှ မခြားတော့ပေ။ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်နှင့် သင်၏ကြားတွင်ရှိနေပေသည်။ ခရစ်တော်ထံပါး သို့ချဉ်းကပ်ပါ။ သို့ပြုလျှင် သူသည် ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်သို့ သင့်အားဆောင်ယူသွားမည်။
”ဘုရားသခင်တဆူတည်းရှိတော်မူ၏။ ဘုရားသခင်နှင့် လူတို့၏ စပ်ကြားမှာ၊ လူဖြစ်သော ယေရှုခရစ်တည်းဟူသော အာမခံတဦး ရှီ၏။” ( ၁ တိ ၂း၅ )
၄။ စတုတ္ထအချက်-ထိုနေ့၌ယေရှုသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှ စကားခြွေခဲ့သည်။
ဗိမာန်တော်စောင့်များသည် ယေရှုကိုမှားယွင်းစွပ်စွဲလျက် ဖမ်းဆီးကြသည်။ သူတို့သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းထံသို့ ခေါ်ဆောင်လာကြပြီး မျက်နှာကို တံတွေး ထွေးကြသည့်အပြင် လက်သီးဖြင့်လည်း ထိုးကြိတ်ကြသည်။ ဂျူးလူမျိုးများသည် တရားဝင်အခွင့်အာဏာမရှိကြသည်ဖြစ်၍ ရောမအစိုးရမင်းဖြစ်သူ ပုန္တိပိလတ်မင်းထံ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြသည်။ ပိလတ်မင်းသည် ယေရှုကို စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီး အပြစ်မရှိကြောင်း တွေ့ရှိသောအခါ သူ၏အသက်ကို ကယ်တင်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းတို့ကို စိတ်ကျေနပ်စေမည်ဟုတွေးထင်ကာ ယေရှုကို ကြာပွတ်ဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့သည်။ ရောမစစ်သားများသည်လည်း ယေရှု၏နောက်ကျောကို ကြာပွတ်ဖြင့်ရိုက်ကာ ဦးခေါင်းတွင် ဆူးရစ်ကိုဆောင်းစေခဲ့ကြသည်။ ခရမ်းရောင်ဝတ်လုံ ကိုလည်း ခြုံစေခဲ့ကြသည်။ ပိလတ်မင်းက ယေရှုကို သနားညှာတာကြ မည်ဟု စိတ်ထင်ဖြင့် လူတို့ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်လာကာရိုက်နှက်ရာ ဒဏ်ချက်များကိုပြသခဲ့သည်။ ပိလတ်မင်းက ]]သူ၌အဘယ်အပြစ်ကိုမျှ ငါမတွေ့}}ဟု သူတို့အားဆိုခဲ့သည်။ (ယော ၁၉း၄) ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းများက ယေရှုကိုတွေ့မြင်ကြသောအခါ ]]သူ့ကို လက်ဝါး ကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားပါ၊ ရိုက်ထားပါ}} ဟုဟစ်ကြော်ကြသည်။ ပိလတ်မင်းက ]]သင်တို့သည် သူ့ကိုခေါ်ဆောင်၍ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားကြပါ၊ အကြောင်းမူကား၊ သူ၌အဘယ်အပြစ် ကိုမျှငါမတွေ့}}ဟု ထိုသူတို့အားဆိုလေသည်။ ဂျူးခေါင်းဆောင်များက ]]သင်သည် ထိုသူကိုလွှတ်လျှင် ကိုယ်တော် သည် ကဲသာဘုရင်၏အဆွေမဟုတ်ပါ၊ ရှင်ဘုရင်လုပ်သောသူမည်သည်ကား ကဲသာဘုရင်၏ရန်သူဖြစ်သည်}} ဟု လျှောက်ဆို ကြသည်။ ပိလတ်မင်းက ]]သင်တို့၏ဘုရင်ကို လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားရ မည်လော}}ဟု မေးမြန်းသောအခါ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ် အကြီးအကဲတို့က ]]အကျွန်ုပ်တို့၌ ကဲသာဘုရင်မှတပါး အဘယ်ရှင်ဘုရင်မျှမရှိပါ} ဟုပြန်ပြောကြသည်။ ထို့နောက် ပိလတ်မင်းသည် ယေရှုကို စစ်သားများလက်သို့အပ်၍ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် ရိုက်သတ်ရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြသည်။
ယေရှုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ သံမှိုဖြင့်ရိုက်သတ်ခံရစဉ် ပြင်းစွာသော ဒုက္ခဝေဒနာကို ခံစားခဲ့ရသည်။ သို့သော် ဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရင်း ဤစကားများကို သူမိန့်တော်မူခဲ့သည်။
”ကရာနီအမည်ရှိသောအရပ်သို့ ရောက်ကြသော်၊ ကိုယ်တော် နှင့်တကွ ထိုလူဆိုးတို့ကို လက်ျmတော်ဘက်၌တယောက်၊ လက်ဝဲ တော်ဘက်၌ တယောက်၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထား ကြ၏။ ယေရှုကလည်း၊ အိုအဘ၊ သူတို့၏အပြစ်ကို လွှတ်တော်မူ ပါ။ သူတို့သည်ကိုယ်ပြုသော အမှုကိုမသိကြဟုမြွတ်ဆိုတော်မူ၏။ အဝတ်တော်ကိုလည်း စာရေးတံချ၍ ဝေဖန်ကြ၏။”( vkum 23;33-34 )
ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်ရန်အတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင် တော်သို့ ယေရှုသွားတော်မူခဲ့ရသည့် အကြောင်းတရားဖြစ်ပေသည်။
”ဆွဲထားသောလူဆိုးနှစ်ယောက်တွင် တယောက်က၊ သင်သည် ခရစ်တော်မှန်လျှင်ကိုယ်ကို၎င်း၊ ငါတို့ကို၎င်း၊ ကယ်တင်လော့ဟု ကိုယ်တော်ကို ကဲ့ရဲ့၍ဆိုလေ၏။ တယောက်မူကား၊ မိမိအဘော်ကို ဆုံးမ၍၊ သင်သည် ဤသူနည်းတူအပြစ် ဒဏ်ခံ လျက်ပင် ဘုရားသင်ကို မကြောက် သလော။ငါတို့သည် ကိုယ်ပြုမိသော အပြစ်နှင့် အလျောက် ခံရ သည်ဖြစ်၍ တရားသဖြင့်ခံရကြ၏။ ဤသူမူကား အဘယ်အပြစ် ကိုမျှမပြုဟုဆိုပြီးလျှင်၊ သခင်၊ ကိုယ်တော်သည် နိုင်ငံတော် တည်လျကရူအးကလာတော်မူသောအခါ အကျွန်ုပ်ကို အောက်မေ့ တော်မူပါဟုယေရှုကိုလျှောက်ဆို၏။ ယေရှုကလည်း၊ ငါအမှန် ဆိုသည်ကား၊ ယနေ့တွင် သင်သည် ငါနှင့်အတူ ပရဒိသု ဘုံ၌ရှိလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။” ( လုကာ၂၃း၃၉-၄၃ )
ယေရှုသည်အပြစ်သားများကို ကယ်ချွတ်ရန်အတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံခဲ့ သည်။ သူကယ်တင်ခဲ့သည့် ပထမဆုံးအပြစ်သားမှာ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် ၎င်း၏အနား၌ အသေခံခဲ့သော ယုံကြည်သည့်သူခိုးဖြစ်သည်။ လူမြောက်များစွာတို့က ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် သင်ယူ၍ ရနိူင်မည်ဟုထင်မှတ်ကြသည်။ သို့ရာတွင် ဤသူခိုးသည် အဘယ်အရာကိုမျှသင်ယူခြင်းမရှိပေ။ ယေရှုကို အားကိုးယုံကြည်ရုံသက်သက်သာဖြစ်သည်။ အခြားသူများကမူ ခံစားမှုတစ်ခု သို့မဟုတ် အတွင်းပိုင်းပြောင်းလဲမှု ရှိရမည်ဟု ဆိုကြသည်။ သို့သော် သူခိုး၌ ထိုသို့သောအရာများလည်းမရှိပေ။ ယေရှုကိုသာ အားကိုးယုံကြည် ခဲ့သည်။
”ယေရှု၏လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်နားမှာ မယ်တော်နှင့် မယ်တော် ၏ညီမဖြစ်သော ကလောဖ၏မယား မာရိနှင့် မာဂဒလမာရိ တို့သည် ရပ်နေကြ၏။ထိုအခါ မယ်တော်နှင့် ချုစ်တော်မူသော တပည့် တော်သည် အနားမှာရပ်နေသည်ကို ယေရှုသည်မြင်တော် မူလျှင်၊ မယ်တော်အား၊ အချင်းမိန်းမ၊ သင်၏သားကို ကြည့်ပါဟူ၍၎င်း၊ တပည့်တော်အားလည်း၊ သင်၏အမိကို ကြည့်ပါဟူ၍၎င်း မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါမှစ၍ ထိုတပည့် တော်သည် မယ်တော်ကို မိမိအိမ်၌သိမ်းထား၏။”(ယော ၁၉း၂၅-၂၇ )
ယေရှုသည် ယောဟန်အား သူ၏မယ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ရန် မိန့်မူခဲ့သည်။ ယေရှုက ကျွန်ုပ်တို့အား ဒေသန္တာရအသင်းတော်မိဿဟာရတွင် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ပြုစုစောင် ရှောက်စေလို သည်။
]]မွန်းတည့်အချိန်မှစ၍ သုံးချက်တီး အချိန်တိုင်အောင် မြေတပြင်လုံး၌ မှောင်မိုက်အတိဖြစ်လေ၏။ သုံးချက်တီးအချိန်၌ ယေရှုက၊ ဧလိ၊ ဧလိ၊ လာမာရှာဗခသာနိဟု ကြီးသောအသံနှင့်ရေူအးကး ကြော်တော်မူ၏။ အနက်ကား၊ အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အဘယ့်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ကို စွန့်ပစ်တော်မူသနည်းဟုဆိုလိုသတည်း။”(မဿဲ ၂၇း၄၅-၄၆)
ယေရှု၏ဝေဒနာနှင့်ပြည့်လျှံသော အော်ဟစ်သံက သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အတွက်လိုအပ်သည့် ရန်ငြိမ်းခြင်းယဇ်ကောင်ဖြစ် လာသောကြောင့် ခမည်းတော် ဘုရားသခင်နှင့်ကွဲကွာသွားခဲ့ ကြောင်းဖော်ပြပေသည်။
”ထို့နောက်မှကျမ်းစာပြည့်စုံစေခြင်းငှါ အမှုရှိသမျှ ကုန်စင်ပြီး သည်ကို သိတော်မူလျှင်၊ ရေငတ်သည် ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ထိုအရပ်၌ ပုံးရည်နှင့် ပြည့်သောအိုးတလုံး ရှိသည်ဖြစ်၍၊ ထိုသူတို့သည် ရေမှိုတထွေးကို ပုံးရည်နှင့်ပြည့် စေပြီးလျှင်၊ ဟုဿုပ်ပင် အကိုင်းဖျား၌ တပ်၍ခံတွင်းတော်၌ ကပ်ထား ကြ၏။”(ယောဟန် ၁၉း၂၈-၂၉)
ဤသည်က ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ရေူအးကးကိုပေးဆပ်ရန် ကြီးမားသည့် ဒုက္ခ ပင်လယ်ကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ရကြောင်း ထင်ဟပ်စေသည်။
”ယေရှုသည်ပုံးရည်ကိုခံပြီးမှ၊ အမှုပြီးပြီဟု မိန့်တော်မူလျက်၊ ခေါင်းတော်ကိုငိုက်ဆိုက်ညွှတ်၍ အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူ၏။” ( ယောဟန် ၁၉း၃၀)
ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သမျှသောအရာသည် ယခုတွင် ပြီးပြည့် စုံလင်လျက်ရှိပြီ။ ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမှတပါး ပျောက်ဆုံးသော လူသားတစ်ယောက်လုပ်ဆောင် ရန်အဘယ်အရာမျှမရှိတော့ပေ။
”ယေရှုသည်လည်းကြီးသော အသံနှင့်ရေူအးကးကြော်တော်မူပြီးလျှင်၊ အိုအဘ၊ အကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကို ကိုယ်တော်လက်၌ အကျွန်ုပ် အပ ပါ၏ဟုမိန့်တော်မူလျက် အသက်ချုပ်လေ၏။” (လုကာ ၂၃း၄၆ )
ကြမ်းတမ်းခက်ထန်သော အရာရှိတစ်ယောက်သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ ရိုက်သတ်ခြင်း ပေါင်းမြောက်များစွာကို တွေ့ဖူးမြင်ဖူးပေမည်။ သူ့စိတ်နှလုံးသည် ခိုင်မာလျက်ရှိသည်။ သို့ရာတွင် ယေရှုအသေခံသည်ပုံသဏ္ဌာန် အတိုင်း အသေခံသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူမမြင်စဖူးပေ။ အရာရှိသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံသောယေရှု၏ အလောင်းတော်ကို မျှော်ကြည့် ခဲ့သည်။ ပါးပြင်မှစီးကျလာသော မျက်ရည်များစွာဖြင့် ထွက်ပေါ်လာသော အရာရှိ၏စကားမှာ ဤသို့ဖြစ် သည်။
”စင်စစ်ဤသူသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်မှန်ပေ၏။” ( မာကု ၁၅း၃၉ )
သင်သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီး သူ၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနှင့် အသွေးတော်အားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ပါစေသော်....။ အာမင်။
တရားဒေသနာမတိုင်မီ နှုတ်ကပါတ်တော်ဖတ်ကြားခြင်းကို Mr. Abel Prudhomme မှဆောင်ရွက်သည်။ မာကု ၁၅း၂၅-၃၉ ။
တရားဒေသနာမတိုင်မီ ]]ဆူးရစ်သရဖူ}} သီချင်းအားဖြင့် Mr. Benjamin Kincaid Griffith မှချီးမွမ်းသည်။
( သင်းအုပ်အားဖြင့်ပြောင်းလဲလာသော Ira F. Stanphill 1914-1993 မှသီကုံးရေးဖွဲ့ထားသည်။
"ထိုအခါပိလတ်မင်းသည်ယေရှုကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားစေခြင်းငှါ ထိုသူတို့လက်သို့ အပ်သဖြင့်၊ သူတို့သည် ကိုယ်တော်ကိုယူ၍ ထုတ်သွားကြ၏။ ကိုယ်တော်သည် မိမိလက်ဝါးကပ်တိုင် ကိုထမ်းလျက် ဦးခေါင်းခွံအရပ် ဟူ၍တွင်သောအရပ်သို့ ထွက်တော် မူ၏။ ထိုအရပ်ကား၊ ဟေဗြဲစကားအားဖြင့် ဂေါလဂေါသ အမည်ရှိ၏။ ထိုအရပ်၌ ကိုယ်တော်ကို အခြားသောသူ နှစ်ယောက်နှင့်တကွ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားကြ၏။ ထိုသူနှစ်ယောက်အလယ်မှာ ယေရှုနေရာကျသတည်း။" ( ယောဟန် ၁၉း ၁၆-၁၈ )
၁။ ပထမအချက်-ထိုနေ့၌မှောင်မိုက်အတိကျရောက်ခဲ့သည်။မဿဲ ၂၇း၄၅၊ ထွက် ၁ဝး၂၁-၂၂
၂။ ဒုတိယအချက်- ထိုနေ့၌ ဗိမာန်တော်အတွင်းရှိ ကုလားကာကွဲသွား ခဲ့သည်။
မဿဲ ၂၇း၅၁ က
၃။ တတိယအချက်-ထိုနေ့၌ မြေကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့သည်။မဿဲ ၂၇း၅၁ခ၊ ၁တိ ၂း၅
၄။ စတုတ္ထအချက်-ထိုနေ့၌ယေရှုသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှ စကားခြွေခဲ့သည်။ ယောဟန် ၁၉း၄၊ လုကာ ၂၃း၃၃-၃၄၊ ၃၉-၄၃၊ ယော ၁၉း၂၅-၂၇၊ မဿဲ၂၇း၄၅-၄၆၊ ယော ၁၉း၂၈-၃၀၊ လုကာ ၂၃း၄၆၊ မာကု ၁၅း၃၉